Imelana njani nekristale yesafire yeApple Watch Series 3 Edition? | Ndisuka mac
Imelana njani nekristale yesafire yeApple Watch Series 3 Edition?
Uvavanyo lolu hlobo luhlala lulungile ukubona ukunganyangeki kwezi ntlobo zezinto zinezinto ezingaphaya kweenkampani ngokwazo. Kule meko, ividiyo esinayo emva kokutsiba isibonisa ubungqina isafire ikristale ukumelana neApple entsha Watch 3 ($ 1299) xa kuthelekiswa neTissot enolu hlobo lwekristale yesafire.
U-Apple wenza yonke imizamo yokubonisa ukuba le glasi yoluhlu lwe-3 Edition imodeli iyamelana nokukrwela, kodwa kungcono ukubona ngqo kwividiyo ukuba oku kuyinyani kwaye ngaphezulu kwako konke ukuya kubungakanani. Thina eSpain asinakho ukhetho lokuthenga ezi modeli zeApple Watch Edition, ezenziwe nge-ceramic kunye nesafire, kodwa e-United States zinjalo, kwaye abanye banobuganga bokwenza ezi mvavanyo ukubona ukuba bakude kangakanani.
Le yimeko yejelo le-YouTube le UJerry rig yonke into, Esibonisa kule vidiyo phantse imizuzu emithandathu kuvavanyo lobulukhuni lolu hlobo lweglasi. Ngokucacileyo, isafire yekristale yeApple Series 3 Edition iiwotshi zikwindawo ephezulu ngokokuhlala, kodwa kangakanani?
Uyabona kule vidiyo ukuba imodeli yeTissot kule meko, ibetha iApple Watch hayi kancinci. Zombini iiwotshi zinayo le nto ibandakanyiwe kwiglasi njengoko ibonisiwe kuvavanyo, kodwa imeko yewotshi yaseSwitzerland ibonakala ngathi iyaxhathisa kuneye-Apple. Izigqibo ezenziwa ngumntu ngamnye njengoko bafuna kodwa into enokubonakala kolu vavanyo yile I-sapphire ye-Apple iyamelana kancinci kuneTissot. Ngayiphi na imeko, zombini iimodeli ezinolu xwebhu zixhathisa ukukrala kunye nokukrwela kakuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Imelana njani nekristale yesafire yeApple Watch Series 3 Edition?
Sivavanye iAppappworks 2 app entsha
Indlela yokwehlisa isantya esivela kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra ukuya kwi-MacOS Sierra